Zinedine Zidane oo albaabada ufurey shaqada tababarenimo ee Xulka France Horyaalka France
Home Horyaalka France Zinedine Zidane oo albaabada ufurey shaqada tababarenimo ee Xulka France
Zinedine Zidane oo albaabada ufurey shaqada tababarenimo ee Xulka France
Real Madrid Tababaraheeda Zinedine Zidane ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa inuu tababare France noqdo mustaqbalka.
48 jirkaan ayaa u magacaabay madaxweynaha FFF Noel Le Graet inuu yahay fikirka xulka qaranka ee badalka Didier Deschamps , kaasoo qandaraas kula jira kooxda heysata Koobka Adduunka ilaa 2022.
Qandaraaska Zidane ee Madrid ayaa sidoo kale dhici doona 2022, dhanka kale, xiddigii hore ee khadka dhexe ayaa albaabka u furay inuu qabto booska tababare ee Les Bleus mustaqbalka.
“Xiriirka aan la leeyahay Le Graet waa mid wanaagsan. Waan is naqaanay tan iyo 1998,” ayuu Zidane u sheegay suxufiyiinta. “Waxay noqon kartaa ujeedo maalin maalmaha ka mid ah, horay ayaan u iri, markii aan bilaabay tababarenimada 10 sano ka hor, inay tahay wax suurtagal noqon kara maalin uun.
“Haatan waan joogaa. Waan ku raaxeysanayaa waxa aan halkaan ku sameynayo. Mustaqbalka waan arki doonaa, ma ogaan doontid. Laakiin maskaxdaydu waxay ku jirtaa maalinba maalinta ka dambeysa Real Madrid.”
Zidane ayaa haatan kujira markiisii ​​labaad ee uu leyliyo kooxda heysata horyaalka Spain, waxaana uu kula guuleystay labo horyaal oo La Liga ah iyo seddex horyaal oo Champions League ah.
Previous articleReal Madrid oo weyneysa Sergio Ramos hadii Gareth Bale soo laabto
Next articleJamie Carragher: oo tilmaamay Cida ay saarneyd masuuliyada Daafaca Liverpool ee Kulanka Liecester